एउटा यस्तो रुख जसले एउटै बोटबाट एक करोड आम्दानी दियो (भिडियो सहित)
Homeसमाचारएउटा यस्तो रुख जसले एउटै बोटबाट एक करोड आम्दानी दियो (भिडियो सहित)
September 10, 2020 admin समाचार 16576
काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका–५ कानपुरका सिंह बहा:दुर लामाले पछिल्लो ६ वर्षदेखि बुद्ध चित्त मालाको खेती गर्दै आएका छन् । ला’माका अनुसार उनले एउटै बोट’बाट एक करोड रुपैयाँ’सम्मको माला बिक्री गरे ।
चीनबाट आउने ग्राहक वा व्यापा’रीले बुद्ध चित्तका दाना साइज नापेर खरिद गर्छन् । बौद्ध धर्मा’वलम्बीहरुले जप र मालाका रुपमा प्रयोग गर्ने बुद्ध चित्तको माला निकै महंगोमा बिक्री हुन्छ ।
बौद्ध धर्मा’वलम्बीहरुको आस्था’सँग जोडिएको माला किन्न चीन लगायत अन्य तेस्रो मुलु’कबाट समेत ग्राह’कहरु काभ्रे पुग्छन् । यही खेती गर्दै आएका कृषक लामा’ले ठूलो भन्दा पनि साना दाना म’हंगोमा बिक्री हुन्छ ।
बुद्ध चि’त्तको एक सय आठ दाना’को माला बना’इन्छ । यस्तो माला कम्तिमा १३ लाख रुपैयाँ’सम्ममा बिक्री गर्ने अनुभव ला’माले हामीसँग साझा गरे ।
बुद्ध चित्तको खेती कसरी गर्ने ? यो कस्तो भूगोलमा हुन्छ ? लगानी, घाटा, नाफा, बजार कस्तो छ ? लगायत`का जिज्ञासा मेट्न कृषककै गाउँठाउँमा पुगेर तयार पारिएको भिडि’ओ अन्तर्वार्ता पूरा हेर्नुहोला ।
बढ्यो सुनको भाउ, तोलाको आज कतिमा कारोबार हुँदैछ ? हेर्नुहोस्
फेरि बढे संक्रमित, नेपालमा आज कति संक्रमित थपिए ? हेर्नुहोस्…
अद्भुत प्रतिभाकी धनी जिया भुसालले बितेका बाबा सम्झिएर भक्कानिइन् (भिडियो हेर्नुहोस्)
August 29, 2020 admin समाचार 17622
कपिलबस्तु जिल्लाको बुद्धभुमी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ को विरपुरकी ६ वर्षकी बालिका जिया भुषा’लले ६ वर्षकै उमेरमा आफ्ना बाबुलाई गुमाइन् । मृत्यु के हो भन्ने थाहा नहुँदै बालिका जियाले आफ्ना बाबु’लाई गु’माउन पुगेपछि जियाले आँफुलाई
गुल्मीका उपप्राध्यपकको सङ्क्रमणका कारण मृ’त्यु, सबै स्तब्ध
June 2, 2021 admin समाचार 4939
गुल्मीमा सङ्क्र’मणका कारण उपप्राध्यपकको मृ’त्यु भएको छ । जिल्लाको रेसुंगा बहुमुखी क्याम्पसका उपप्रा’ध्यापक तथा रेसुंगा नगरपा’लिका वडा नम्बर एकका ५४ वर्षीय कुन्जरमणि गौतमको चितवन मेडिकल कलेजमा उप’चारको क्रममा गए राती मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय गु’ल्मीले
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, भोलि मिति माघ २० गते मंगलबारको राशिफल हेर्नुहोस्
February 1, 2021 admin समाचार 6533
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) पारीरीवारिक झोर झ’मेलाको सामना गर्नु पर्नेछ । सामान्य आर्थिक अभाबको सम्भा’बना रहेकोछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामान्य यात्रा का’रक समय
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (241923)